Top 10 Free Photoshop Alternatives - Free Alternatives ka Photoshop
> Resource> Alternatives> Get Free Alternatives ka Photoshop na-enwe Photo-edezi
Maa, Adobe Photoshop bụ ike kacha ike foto edezi software na ụwa. Ma na-enwechaghị ahụmahụ na ndị ọkachamara hụrụ ya n'anya. Otú ọ dị, Photoshop bụ nnọọ oké ọnụ ma na bụghị onye ọ bụla nwere ike ime ya. Ọ bụ ya mere ọtụtụ ndị na-achọ free Photoshop uzo ozo nke mere na ha nwere ike idezi EBIONITISM photos ndị kasị mma ma na-enweghị ihe ọ bụla na-eri.
Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị na-achọ free uzo ozo ka Photoshop, ị ga-amasị isiokwu a. Ebe anyị na-aga ikwu okwu banyere n'elu 10 free Photoshop ọzọ.
Free Photoshop ọzọ 1: GIMP
GIMP a na-ewere dị ka "free Photoshop" na ọtụtụ foto edezi atụmatụ yiri Photoshop. Ọ enye gị ohere ike ọtụtụ foto n'ígwé, ịgbanwe onye akụkụ nke foto, ike nzacha, wdg wezụga ya, ọ na-akwado ọtụtụ faịlụ formats, gụnyere Photoshop PSD. Ọtụtụ ndị na-ekwu GIMP bụ ihe kasị mma free Photoshop ọzọ foto edezi software.
Free Photoshop ọzọ 2: Paint.NET
Paint.NET bụ kasị free foto nchịkọta akụkọ maka Windows. Na onye kensinammuo interface na nkwado maka n'ígwé, na-akparaghị ókè Wepu, pụrụ iche foto mmetụta, ọ na-adịkarị nabatara ọha na eze. Ụfọdụ ndị ọzọ oké foto edezi ngwaọrụ na-nyere.
Free Photoshop ọzọ 3: Photoscape
PhotoScape abịa na onye ọrụ-enyi na enyi interface. Ọ na-enyere ndị ọrụ dezie oyiyi na ike GIF dị ka mma. Ọ bụ ezie na ọ na-adịghị nwere dị ka ọtụtụ atụmatụ dị ka nke Adobe Photoshop, ọtụtụ ọrụ ka dị ka ya n'ihi na a ole na ole òké cilcks, ọrụ ike welie ha foto site resizing, agba ukpụhọde,-acha ọcha itule, backlight mgbazi, okpokolo agba, na-agbakwunye ederede, na-eru foto, red anya mwepụ, wdg
Free Photoshop ọzọ 4: n'ụsọ oké osimiri
N'ụsọ oké osimiri bụ a Mac naanị free foto nchịkọta akụkọ na koko kpuchie ya. Gradients, textures na mgbochi aliasing maka ma ederede ad ahịhịa ọrịa strok na-nyere. Ọ na-eji sae ala faịlụ Ọkpụkpọ dabeere gburugburu GIMP si technology.
Free Photoshop ọzọ 5: Artweaver
Artweaver awade a dịgasị iche iche nke sere ngwá ọrụ dị ka dị iche iche ahịhịa ekwekọghị, ọkọlọtọ mmetụta dị ka nkọ, ghara ịma na embos, wdg-enyere gị aka agba creatively. E wezụga na, ọ na-enye ezi pen mbadamba nkwado.
Free Photoshop ọzọ 6: Inkscape
Inkscape bụ a free ndịna-emeputa nchịkọta akụkọ yiri Adobe Illustrator, Corel Bịaruo, Freehand, ma ọ bụ Xara X. Ya ojiji nke scalable Vector Graphics (SVG), onye na-emeghe XML dabeere W3C ọkọlọtọ, dị ka nwa afọ format-eme ka ọ dị iche iche site na ndị ọzọ photoe diting software .
Free Photoshop ọzọ 7: Pụtara
Pixen bụ a free foto nchịkọta akụkọ maka Mac. Ọ na-abịa ọtụtụ oké atụmatụ dị ka foto n'ígwé, na-aga aga-eke, palette, wdg O na-akwado ọtụtụ dị iche iche faịlụ ụdị.
Free Photoshop ọzọ 8: SUMO Agba
Sumo Agba bụ a free online flash dabeere image nchịkọta akụkọ mepụtara Sumo Ltd. Ọ bụ nnọọ yiri Photoshop, na ọ na-atụmatụ ọtụtụ nke otu ngwaọrụ, ma Sumo Agba na-haziri maka kwupụta atụ, ebe ndị ọzọ software dị ka Photoshop ndị ọzọ ruru eru maka oké image edezi.
Free Photoshop uzo ozo 9: CinePaint
CinePaint bụ a free foto nchịkọta akụkọ maka Linux, Mac na BSD. Ọ na tumadi mere maka eserese na retouching bitmap okpokolo agba nke fim dị ka Scooby-Doo, Harry Potter na ọkà ihe ọmụma si Nkume, Ikpeazụ eh na Stuart Little. Etiti njikwa, yabasị skinning, na ikike na-arụ ọrụ na 16-bit na-ese n'elu mmiri mgbe pikselụ n'ihi na elu ike nso Onyonyo (HDR) bụ pụrụ iche atụmatụ a free foto edezi software.
Free Photoshop ọzọ 10: PhotoFiltre
PhotoFiltre dị obere size ma na nnọọ ike foto edezi ngwaọrụ. N'ihi na nke obere size, ọ na-agba ngwa ngwa. Vector selections, masking, agakọ, automatization na plugins bụ isi atụmatụ a free image edezi software. E wezụga na, ọ ga-eji dị ka ihe oyiyi onyenlereanya na Ntụgharị.
Real Downloader Alternative: Download Online Video mma karịa Real Downloader